मृर्गौला पीडित रिलामीलाई यति धेरै सहयोग कस्ले दियो ? - दैनिक नेपाल न्युज
मृर्गौला पीडित रिलामीलाई यति धेरै सहयोग कस्ले दियो ?
तनहुँ, २८ भदौः दुवै मिर्गौला पीडित तनहुँको ऋषिङगाउँपालिका–८ पल्ट्याङका ४१ वर्षीय लुमबहादुर रिलामीलाई सहयोग गर्दै तनहुँ समाज हङकङका पूर्व अध्यक्ष भीमराज गुरुङ । तनहुँ समाज हङकङले नेपालीको उपचारका लागि रु एक लाख ८२ हजार ८०० र रु दुई लाख ७४ हजार एकसय सहयोग गरेको छ ।
नेपालीलाई साउदीमा रहेका नेपालीले सङ्कलन गरी पठाएको रकम सोमबार हस्तान्तरण गर्दै राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ तनहुँका अध्यक्ष एस.बि.नेपाली । तस्बिरः सानेबहादुर नेपाली/रासस
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका लागि आफू मैदानबाट लडिरहन्छु : वरिष्ठ नेता पौडेल
बाढीले क्षति पुर्याएको लोकप्रिय माध्यमिक विद्यालयको मर्मत गर्दै नेपाली सेना